Isebe le-Frente kuMar. Urb Altamar 2
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguCarlos
Le ndlu ikumgangatho wesibini kwisakhiwo iAltamar 2 kwaye inombono ophefumlayo wolwandle. Ilungele ukuhlalisa ngokukhululekileyo abantu aba-6. Ineendawo zokupaka ezikhethekileyo.
Sikumizuzu emi-5 kude nodederhu lweevenkile. Ukuphuma ngokuthe ngqo elunxwemeni kukulungele ukuhamba kwasekuseni ecaleni lolwandle. Siye sagubungela iindawo elunxwemeni ezinokuthi zisetyenziswe kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kangangoko. Sibandakanya yonke into ukusuka kwioyile, ityuwa, ipepile, iswekile ukuya kwiipani zokuqhotsa, iimbiza, umenzi wekofu kunye nezixhobo eziyimfuneko ekuphekeni.
Igumbi ngalinye, kunye negumbi lokuhlala, linendawo yalo yokupholisa umoya. Amagumbi anamagumbi okulala kunye nezinxibo apho kukho indawo eyaneleyo yokugcina izinto zakho. Ukongeza, amagumbi okuhlambela anamanzi ashushu, isepha engamanzi, ishampu kunye nesomisi seenwele.
Uphuhliso lunendawo yokuhlala enedama lokuqubha kunye nejacuzzi.
* Indawo yokomisa iimpahla
* Ikofu yasimahla, amanzi kunye neti
* Izitulo zaselwandle kunye neambrela
* Umthamo omkhulu we-Intanethi
* I-Smart TV eneTV ethe ngqo
4.96 ·Izimvo eziyi-75